Gardnerella noma vaginosis webhaktheriya namuhla uvame kakhulu abesifazane abaneminyaka ephakathi kwengu-engamashumi amabili mahlanu. vaginosis Amagcikwane kuyinto isifo Izitho zokuzala kwabesifazane. Ihlobene ngokuseduze iziyaluyalu imvelo lwesitho sangasese sowesifazane. Isikhathi esining impela, ukutheleleka sihamba ngaphandle izimpawu njengoba yalokhu kwelashwa eliyinkimbinkimbi kakhulu. Gardnerella ubonakalisiwe, izimpawu zayo ngesimo mhlophe esindayo oluphuma esithweni sangasese, okuyinto abe iphunga Fishy. Uma ubona lezi zimpawu liyadingeka ngokushesha kudokotela ubani imithi ukwelashwa okufanele nokusiza ukuba babhekane nalesi sifo. Musa qinisa ukwelashwa, ngakho musa uzisole. Phela, ungase uzizwe ezihlukahlukene zinkinga, ingozi empilweni.
Idinga ukwelashwa gardnerella izidakamizwa salokho ikhetha udokotela ukuba khona. Into esigabeni sokuqala kwelashwa ukuqedwa microflora pathogenic. Ukuze wenze lokhu, linqume antimicrobial, futhi baqhuba ukwelashwa wendawo.
Ekwelapheni isigaba sesibili ulungisa isimo nje evamile lwesitho sangasese sowesifazane kanye uyalulama acidosis acid amagciwane kunciphisa ingozi umkhuba oqhubekayo wokubuka entsha lesi sifo.
Ngenxa iziyaluyalu lwesitho sangasese sowesifazane microflora ukwenyuka zenani kuholela Gardnerella Gardnerella ukwelashwa ukwakhiwa ukunikeza. Ebekwe udokotela izidakamizwa ngempumelelo kakhulu ekwelapheni namuhla kungenziwa kalula ithengwe at Pharmacy, yebo, ngesiphakamiso udokotela.
Izimbangela lesi sifo kungaba ukusetshenziswa eside ngokwanele kwemithi elwa namagciwane, kanye iziyaluyalu kokuya esikhathini kanye nezifo ezihlukahlukene angadluliselwa ngokuhlangana ngokocansi.
Ngezinye izikhathi kubangela gardnerella ukulunywa. Ukwelashwa, imithi kokusisiza ukuba sibhekane nesimo nalesi sifo ngempumelelo futhi ngokushesha. Kodwa awukwazi ukusebenzisa, ngoba uma iyekwa ingelashwa vaginosis webhaktheriya, abanye yezinkinga kungenzeka, isibonelo, kungase kubonakale ukutheleleka olusesibelethweni, futhi lisongela nokuchitheka kwesisu noma kwangemva kokubeletha endometritis.
Ngaphezu imithi elwa namagciwane ukuthi udokotela ekunika ukwelapha lesi sifo, kubalulekile ukuba baphuze amavithamini kanye evuselela mzimba. Ukusetshenziswa izifo ukwelashwa Gardnerella, izidakamizwa ukuthi ukunciphisa microflora lwesitho sangasese sowesifazane kanye ukunciphisa gardnerellas lemali kokuvamile. Lawa izidakamizwa njenge laktobakterin futhi bifidobakterin.
Zonke imithi okufanele zithathwe njengoba udokotela wathi, imithamo ngenxa scheme, okuyinto kuyoba kuwe. Lapha kudingeka uqaphe kakhulu ukugwema ukweqisa izidakamizwa. Gardnerella kuyingozi kakhulu ngesikhathi sokukhulelwa, impatho lapha kufanele kube ezamanje. Ngempela, endabeni Usuqhubekile ngokujulile kungenzeka wayethole isifo esithile zabasebenzi ngaphambi kwesikhathi. Ephambi kwezinduna vaginosis webhaktheriya kwabesifazane abakhulelwe zingavela izifo ezingaba sokukhulelwa, kanye amathuba yezinkinga ngemva kokubeletha. Akunakusetshenziswa do akazibekanga medicate. Kuphela udokotela ngesisekelo socwaningo, imiphumela yakho, ungakwazi babela ukuphathwa efanele.
Ngo senyanga yokuqala sokukhulelwa bamiswa izidakamizwa ezifana metronidazole futhi clindamycin, okuyinto nhlobo ukungena kwesigamu sokukhulelwa yesibili. Ngezinye izikhathi, ngaphezu noma esikhundleni izibhebhe elibekelwe abakhulelwe suppositories lwesitho sangasese sowesifazane. Ngaphezu kwalokho basuke ngokuvamile ebekiwe immunomodulators futhi izidakamizwa antiallergic senzo.
Ukukhulelwa ukudabula zokuphepha, nomshikashika lalichuma ijabula, ungazindeli ekwelapheni lesi sifo. Uma usuqede imithi oyinikiwe, ngenyanga ungakhohlwa kabusha wahlola ukuze uqinisekise akukho emomozini Gardnerella. Kufanele ube ngokuphelele ukuthi une amagciwane akugulisayo.
Indlu 8x8 izingodo. Ukuhlela nokuqala ukwakha
Catholic Christmas: umehluko kanye izici